इकोनोमिक अपडेट : सरकारको नाममा ८४ अर्ब १३ करोड बेरुजु !
सरकारको नाममा ८४ अर्ब १३ करोड बेरुजु !
३ माघ, काठमाडौं
राज्य कोषबाट खर्च भएको तर, स्रोत नखुलेको रकम (बेरुजु) ८४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा ७ अर्ब ३६ करोड मात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । बेरुजु बढेपछि सोमबार सचिवस्तरीय बैठक डाकेर सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पुस मसान्तसम्म १ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका नाममा ८४ अर्ब १३ करोड रुपैँया बेरुजु रकम छ । त्यसमध्ये नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिना वितिसक्दा जम्मा ७ अर्व ३६ करोड मात्र फर्छ्यौट भएको छ ।
सबैभन्दा बेरुजु रकम धेरै भएका मन्त्रालयहरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । ती मन्त्रालयका नाममा ७ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु रकम छ ।
यस्तै एक अर्बभन्दा बढी र ७ अर्बभन्दा कम बेरुजु रकम हुने मन्त्रालयहरु ७ वटा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने र कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्नैपर्ने नीति लिएको छ । तर, वितेको नौ महिनामा जम्मा १.७६ प्रतिशत मात्र फर्छ्यौट भएको छ ।
सामान्यतया बेरुजुको अर्थ हिसाब देखाउन बाँकी रकम हो । तर राज्यकोषमा बेरुजु रकम बढ्नुको अर्थ भ्रष्टाचारमा बृद्धि भएको मानिन्छ ।